နည်းပညာသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Enable သို့မဟုတ် Disable လုပ်ပါသလား။ | Martech Zone
နည်းပညာသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို Enable သို့မဟုတ် Disable လုပ်ပါသလား။
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 10, 2008 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 11, 2015 Douglas Karr
ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်၎င်း၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအများစုသည် IT ဌာနမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်မလိုသောကုမ္ပဏီမှလာသည်။ “နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်ငါတို့၏အိုင်တီယောက်ျားတွေစကားပြောရန်မလိုပါအဖြစ်!"ငါမကြာခဏကြားသောဂါထာဖြစ်ပါတယ်"သူတို့အလုပ်များနေတယ်"။
တစ်ခုချင်းစီကိုတောင်းဆိုချက်ကိုမှတဆင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပြည်တွင်းရေးဖြစ်စဉ်ကို နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်း ၄၈၂ ခုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် မပေးနိုင် ပြီးပါစေ။ ဖြစ်ချင်တော့, ဒီကယ့်ကိုရတူညီတဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်ကြသည် မကျေမနပ် သင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ပြင်ပကြည့်ရှုသောအခါ!
မေးစရာမေးခွန်းကသင်၏ IT ဌာနသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားဖြည့်ပေးနေသလားသို့မဟုတ်ပိတ်ထားသလား။ အကယ်၍ သင်သည်အိုင်တီဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ဖောက်သည်များအားနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်သလားသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရုံသာပြုသည်လား။
အဖြေနှစ်ခုစလုံးကနောက်တစ်ခုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ကြီးထွားလာနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သည်။ ငါသိပိုပိုပြီးစျေးကွက်သမားတွေပါ စိတ်ကုန်သော သူတို့ရဲ့အိုင်တီဌာနနှင့်အတူ။ ငါအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု (၀ က်ဘ်ဆာဗာဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုတည်ခင်း host ည့်ခံ) သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးပြင်ပ hosting အစီအစဉ်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ! သင်၏ IT ဌာနသည်အလုပ်ဖြစ်သင့်သည် နှင့် သင်တို့ဆီသို့ enable သင်၏စီးပွားရေးကိုစီမံရန်လိုအပ်သည့်နည်းပညာ။
ဤတွင်မှအလွန်ကြီးစွာသောပို့စ်ပါပဲ Hugh MacLeod ခေါင်းစဉ်အပေါ်:
10:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 40
ငါတော်တော်များများ startup များအတွက်နည်းပညာနှင့်စစ်ဆင်ရေးပြေးပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အလွန်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာ startup ကြီးမြတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ။ မဟုတ်လျှင်နည်းပညာအသင်း, ops, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် biz dev အကြားပူးပေါင်းအလုပ်အတွက်မဟုတ်လျှင် ... ကောင်းပြီဘာမှဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်သည်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေရန်လိုအပ်သည် အိုင်တီ၌များစွာသောလူသည်သင့်အားဆိုးကျိုးများစွာပေးလိမ့်မည်အကြောင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ) -
၁။ နည်းပညာဘတ်ဂျက်အများစုသည်အလွန်တင်းကျပ်သည်။ ရှူရှိုက်စရာနေရာမရှိဘူး။ သငျသညျအရင်းအမြစ်များကိုကုန်ကျမည်ဟုအခြားအရာတစ်ခုခုကိုဆောင်ခဲ့ပေမယ့်သင်စားပွဲပေါ်မှာမှဘာမှယူပေမယ့်တောင်းဆိုမှုများကိုသင်ပျက်ကွက်သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်နှင့်သင်၏လောဘကုမ္ပဏီထိခိုက်စေသော။ မင်းတစ်ခုခုလိုချင်တယ်၊ နည်းပညာအရင်းအမြစ်များကိုအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
၂ ။ သူတို့ကိုသင်ကဲ့သို့ဆက်ဆံပါကသူတို့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ အဲ့တာဘဝပဲ။ IT ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သင်၏စီမံကိန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်သေချာစေရန်အချိန်ကိုရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်။ ပါဝင်မှုကိုတောင်းယူပါ။ သင်ပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
စီးပွားရေးနည်းပညာသည် ၀ န်ထမ်းများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ ဒါထက်လျော့နည်းဘာမှမကကုသမှုကိုအားနည်းသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နည်းပညာမဟုတ်သောသူများအတွက်လွယ်ကူပုံရသောနည်းပညာစီမံကိန်းများသည်ပြီးမြောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ နှင့်ခက်ခဲစီမံကိန်းများကိုတစ် ဦး အလွန်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ Silo များကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ပါကရလဒ်ကောင်းများကိုမျှော်လင့်သင့်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစည်းအဝေးတိုင်းတွင်သင်၏ IT မှလူတစ်ယောက်ရှိသင့်သည်။ ဒါကငါအမြဲထောက်ခံသည်အရာဖြစ်တယ်။
11:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 37
Apollo၊ ခင်ဗျားပြောခဲ့သမျှကိုကျွန်တော်သဘောတူပေမယ့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုက IT ကိုပိတ်ခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ရှည်လျားပြီးတိုတောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ IT သည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်၊
အိုင်တီသမားတွေက Idiots တွေမဟုတ်ကြဘူး။ ဒီလိုမျိုးမဆက်ဆံသင့်ဘူးဆိုတာငါသဘောတူတယ်။ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်မှာသူ / သူမ၏ဌာန၏ပုံသဏ္changeာန်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်သူ၏လူများသည်မကောင်းသောအပြုအမူများနှင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုမရှိစေရန်သေချာစေရန် IT ဦး ဆောင်မှု၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
IT ဌာနကောင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန် IT တွင်စစ်မှန်သောခေါင်းဆောင်မှုလိုအပ်သည်။ ခေါင်းဆောင်က“ ငါဟာနည်းပညာဆိုင်ရာဂုရုတစ်ယောက်” ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္stepကိုစွန့်ခွာပြီး“ ဒီနေ့မင်းကိုအိုင်တီကဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ” ကိုတင်ထားရမယ်။ ဦး ထုပ်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်အိုင်တီပါဝင်သင့်သောကြောင့်သင်အိုင်တီ၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ပြီး IT ၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်လျှင်သင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
IT ဌာနကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်အိုင်တီခေါင်းဆောင်သည်အိုင်တီလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် IT အကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အိုင်တီသည်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်၊ စီးပွားရေးနှင့်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
10:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 09
ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ IT ဌာနသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်အများစုကိုပိတ်ထားသည်။
11:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 24
ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ရသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်စီအိုင်အေဖြစ်ခြင်းသည်အိုင်တီဌာနအတော်များများသည်၎င်းတို့ကိုမကိုင်တွယ်လိုကြသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ရာကိုပစ်ပယ်မည်ဟုကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ သက်တူရွယ်တူများနှင့်အထက်လူကြီးများအားသူတို့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုကိုလိုချင်ပါကအိုင်တီသည်စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုမဟုတ်ဘဲဖြစ်သင့်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် အကယ်၍ စီမံခန့်ခွဲမှုကဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လျှင်စီမံကိန်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကတောင်းဆိုမှုကိုနားထောင်ပါ။ ရိုးရှင်းပါတယ် အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးအကုန်အကျနည်းသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုတင်ပြပါ။ သူတို့အားအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
အရေးကြီးတာကအိုင်တီရဲ့ ဦး စားပေးတွေကိုအရည်အသွေးအာမခံချက်၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အိုင်တီက ၀ င်ငွေမထုတ်ပေးနိုင်ပေမယ့်ကုမ္ပဏီကိုနှစ်စဉ်ငွေပိုချွေတာနိုင်တာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သုံးစွဲသည်ထက် အိုင်တီဆိုတာကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းသည်“ ဘတ်ဂျက်တွင်မရှိ” သည့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်ထိရောက်စွာတိုးတက်စေခြင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုတာကငါတို့စီမံကိန်းတွေကို ဦး စားပေးရမယ်၊
12:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 25
နည်းပညာအသစ်များမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုကိုမသန်မစွမ်းဖြစ်စေမည့် IT-ယောက်ျားများသာမဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ဟာနည်းပညာအသစ်များကိုငြင်းပယ်နိုင်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားတွေနဲ့တွေ့မိတယ်၊
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပါ ၀ င်သူမည်သူမဆိုစမတ်ကျပြီးအကုန်အကျသက်သာသောနည်းပညာအသစ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ မလိုက်နာသူများသည်ခက်ခဲသောအချိန်များနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည်ထက် ပို၍ ခက်ခဲသောအချိန်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
12:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 6, 56
တစ်ချိန်က Peter Drucker က“ ငါအိုင်တီမှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ” ဆိုသည့်စကားတစ်ခွန်းရှိခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် အိုင်တီရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်မှုကနည်းပညာပဲ။ အိုင်တီသည်သတင်းအချက်အလက် (သို့) ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလူတန်းစားများအားရံဖန်ရံခါ ၀ န်ထမ်းအင်အားနည်းပါးသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် IT ဌာနအများစုကို“ HelpDesk” သို့မဟုတ်“ Email Department” ဟုအမည်ပြောင်းသင့်သည်။
12:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 07
ပြီးတော့“ ဖုန်းထောက်ပံ့မှု” လည်း!
မေလ 29, 2013 မှာ 9: 12 AM
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က Peter Drucker သည်ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည်။ စာနယ်ဇင်းများသည်ယခင်သတင်းအချက်အလက်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း Lords နှင့် Baron များကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ဟာအပြာရောင်ကော်လာပိုဖြစ်လာတယ်၊ သူတို့ဟာအမှန်တကယ်ဖန်တီးသူတွေထက်ပိုပြီးပညာရှင်အဖြစ်မြင်ကြပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်သူတို့၏အိုင်တီဌာနများမှမရည်ရွယ်ဘဲ ဦး စွာစီမံခန့်ခွဲသည်။
တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးကုမ္ပဏီကို ဦး ဆောင်သူများက ဦး စားပေးသတ်မှတ်သင့်သည်။ ထို့နောက်အိုင်တီအပါအ ၀ င်လူတိုင်းကိုပြောပါ။ အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးပြီဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ဒီလမှာမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အရာလည်းအရေးကြီးတယ်။
သင်အိုင်တီကို ဦး စားပေးခွင့်ပြုသည်ဆိုပါကသင်သည်သူတို့ကို Lords နှင့် Barons များဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီများ၏အမြင်အာရုံကိုပံ့ပိုးကူညီခြင်းအတွက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားသင့်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အတွက် ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများအားအဘယ်အရာဖြစ်ပျက်မည်ကိုမပြောခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီကို ဦး ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မေလ 29, 2013 မှာ 10: 33 AM
လုံးဝသဘောတူသည်, @ facebook-1229758293: disqus!